Halista application no badan oo dhib ku ah isticmaalaha Android ka. – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Mobile Apps	 October 28, 2018 October 28, 2018 1 Minute
Waxaan ka war qabnaa hadaan nahay dadka isticmaala android mobile ka markii aan kasoo dagsanno application meel ka baxsan Google Playga ama Webka Rasmiga ah iney nasaameneso, laga yaabana inuu wax ka badalo teleefan yadeena ama sirteena si fudud lagu qaadan karo( gacan sadexaad). Waxaa jira hadaba Google Playga xitaa inuusan amni aheyn oonan lagu aamini karin badanaa sirta. Application badan ayaa jira oo ku jira Google Playga ula jeedkooda uu yahay iney kuu soo bandhigaan xayeysiin aadan rabin.
Waxey sameenayaan ayaa ah inaad ku dhufato xayeysiintaas kadibna ay ku geeyaan website kale, markaas ay ogaadaan nooca xayeysiinta aad rabto ama jeceshahay ayagoo xadayo macluumaad kaaga ku jira telkaaga.
Siduu sheegay website ka BuzzFeed Shirkadda Google waxey ogaatay arintaani iney halis u keeni karto macaamiisheda, waxey ka bixisay dhowr application oo tirada soo dagsatay gaareysa 115 malyan oo mar, waxaana ka mid ah EverythingMe oo tiradiisa gaareysa soo dagsashada 20 malyan oo mar, waxeyna u badnaayeen applicationada ciyaaraha iyo kuwa laisku qurxiyo.
Previous Post Indha furashada dhanka #Technology yada.
Next Post IBM oo la wareegtay Red Hat qiima gaareysa $33.4 Billion.